कसरी हटाउने नाकको ब्ल्याक हेड्स ? - ज्ञानविज्ञान
व्यक्तिको सुन्दरता मुलतः अनुहारमा केन्दि्रत हुन्छ । त्यसैले आफ्नो अनुहार सफा र चमकदार होस भन्ने चाहन्छौ । तर, अनुहारमा आउने दाग-धब्बाहरुले भिलेन खेलिदिन्छन् ।
यसका साथै नाकभन्दा माथि कालो-कालो बिन्दू जस्ता थोप्ला साह्रै नराम्रो देखिन्छ । जसलाई चलन चल्तीमा ‘ब्ल्याक हेड्स’ भनिन्छ । यस्तो कालो थोप्ला टाढैबाट देखिन्छ । अनेक उपाय लगाउँदा पनि यी थोप्ला स्थाईरुपमा हट्दैनन् । यो के कारणले हुन्छ र यसको स्थाई समाधान के हो ?
प्रदुषण मुख्य कारण
नाकमाथि काला थोप्ला बस्नुको प्रमुख कारण वातावरण प्रदुषण हो । प्रदुषणका कारण रौंमा जम्मा हुन्छ र यसको कारण बन्छ । छालाका मसिना प्वालहरुमा मृत्त छाला, धुलो, माटोका काण तथा मैलो जम्मा भइरहन्छ । जसले गर्दा यो छिद्र बन्द हुन्छ र यसमा जम्मा भएको फोहोर कालो कालो बिन्दुका रुपमा प्रकट हुन्छन् ।
नाकमाथि हुने साना छिद्रहरुले मोइस्चर बनाइराख्ने काम गर्छन् । यिनै छिद्रका कारण त्वचा प्राकृतिकरुपमा चिसो रहन्छ । जब यी छिद्र बन्द हुन्छन्, विभिन्न समस्याहरुको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ ।
चिउँडोको छिद्रमा ध्यान पुर्‍याउनुस
आफ्नो चिउँडोको छिद्रको राम्ररी हेरविचार गरियो भने यो समस्याबाट छुट्कारा मिल्न सक्छ । यसका केही उपाय छन्, जसको अभ्यास गर्नुपर्ने हुन्छ । आउनुस, ती उपायहरुबारे जानौं ।
पोर्स सम्वन्धी समस्या भयो भने यसको समाधानका लागि बाफको सहारा लिन सकिन्छ । बाफद्वारा टि्रटमेन्ट लिएर बन्द पोर्सर्लाइ फेरि खोल्न सकिन्छ । यो एउटा प्रभावकारी विधि हो । यसले छालालाई फाइदा पुर्‍याउँछ ।
यसरी पनि गर्न सकिन्छ ट्रिटमेन्ट
क्लिन्जरको सहारा पनि लिन सकिन्छ । मनतातो पानीका साथ कुनै सौम्य फेसियल क्लिन्जरको प्रयोग गरौं । आफ्नो अनुहारलाई भिजाएर क्लिन्जरको सहयोगले १ मिनेटसम्म हल्का हातले मसाज गर्नुपर्छ । मसाज गर्ने बेलामा नाक र चिउँडोमा विशेष ध्यान दिनुस र त्यहाँ मसाज गर्नुपर्छ । एक मिनेटपछि तातोपानीले मुख धुनुपर्छ ।
वाफ लिएपछि यसो गरौं
यो प्रक्रिया पुरा गरिसकेपछि आफ्नो अनुहारलाई मुलायम तौलियाले हल्कासँग पुछौ । यसो गर्दा रौको छिद्र खुल्नेछन् र पोर्स सम्वन्धी स्किनको समस्याबाट छुटकारा मिल्नेछ ।
अरु यस्तै थुप्रै जानकारीको लागि कृपया हाम्रो फेसबुक पेज ज्ञानविज्ञान लाइक तथा सेयर गर्नु होला ताकी अरु थुपै मानिसहरुले जानकारि प्राप्त गर्न सक्नुहोस l
Topics #नाक #ब्ल्याक हेड्स
Don't Miss it चाडै थकाई लाग्नुका कारण र त्यसको समधान
Up Next कपाल झरेर दिक्क हुनुहुन्छ भने अपनाउनुस् यी उपाए
येस्ता छन् पौडी खेल्नुका फाइदाहरु
१. तौल घटाउँछ र आकर्षक बनाउँछ । २. कोलेस्ट्रोललाई सन्तुलित गर्छ । ३. शारीरिक शक्तिमा वृद्धि हुन्छ । ४. रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ्छ ।…
Nurse checking bag of blood while patient gives donation
यस्ता छन्, रक्तदानका फाइदा
तौल घटाउँन मद्दत गर्छ – तपाईको एक पटक रक्तदान गर्दा ६५० देखि ७०० किलो क्यालोरी घट्न सक्छ । तौल घट्नु–बढ्नु…
दाँत दुख्ने, किरा लाग्ने जस्ता समस्या बाट छुटकारा पाउन अपनाउनुस् यी ४ घरेलु उपाय ! जानीराखौ
नियमित ब्रस नगर्दा दाँतको बीचमा आफूले खाएका अन्नका कणहरु बस्दछन्, जब यी कणहरु सड्न थाल्छन्, तब दाँतमा किरा लाग्न थाल्छ…
स्वस्थ शरीर हुन रगत सफा हुनुपर्दछ, कसरी सफा गर्ने त रगत ? जान्नुहोस्
मानिसहरु शरीर स्वस्थ राख्न कति सम्म गर्दैनन् तर पनि उनीहरु बिरामी हुन्छन । मिर्गौलाको कार्यबोझ घटाउन हामीले पनि खानपिनमा होस…
यस्ता छन् फलफूलको जुससँग प्याजलाई खाँदा हुने फाइदाहरू
तपाइले जीवनलार्इ सहज रूपमा जिउन सक्नुहुन्छ । स्वस्थ्य रहनाका लागि खानपान र व्यायामहरूमा विशेष ध्यान दिन जरूरी छ । त्यसका…
मेवा खानुले हाम्रो स्वास्थ्यलाई धेरै फाइदा हुन्छ जुन कुरा हामीले यो भन्दा अगाडिको पोस्टहरुमा चर्चा गरिसकेका छौ | तर, मेवाको…
दिनमा धेरै निन्द्रा लाग्नु डाइबेटिजको संकेत !
दिनको समयका विना कारण धेरै थकाइ लाग्नु र एक घण्टा भन्दा बढी सुत्नु डाइबेटिजको संकेत रहेको अनुसन्धानकर्ताले बताएका छन्। अनुसन्धानकर्ताले…
यस्ता छन्, नङ बलियो बनाउनका लागि घरेलु उपचार
सुन्तलाको ताजा रसमा नङलाई १० मिनेटसम्म डुबाउने । हप्तामा एक वा दुईपटक यसो गर्दा नङ बलियो र सुन्दर हुन्छ ।…
भोजनको नियम बारे जानिराखाैँ, कुन सिजनमा के खाने ?
प्रकृतिले मौसम अनुसार विभिन्न अन्न-उत्पादन दिएको छ । जाडो वा गर्मी उत्पादन हुने अन्न, फलफूल, सागसब्जीले हामीलाई त्यही मौसममा हुनसक्ने…